OMG! यो कस्तो दुःखद घटना, ३ गाउँका ४० जनाको एउटै कारणले मृत्यु… – PathivaraOnline
Home > समाज > OMG! यो कस्तो दुःखद घटना, ३ गाउँका ४० जनाको एउटै कारणले मृत्यु…
admin February 8, 2019 समाज 0
लखनउ। भारतको उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डमा विषालु रक्सी पिउँदा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । उत्तरु प्रदेशको कुशीनगरमा १०, सहारनपुरमा १८, उत्तराखण्डको रुकडीमा १२ जनाको ज्यान गएको छ । करिब २४ जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । दुवै घटनामा शुक्रबार पुलिस र आबकारी विभागका २२ कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ । मृत्यु हुनेहरुले स्प्रिटबाट बनेको रक्सी पिएको आरोप लगाइएको छ ।
कुशीनगरको जवही दयाल चैनपट्टीमा मंगलबार राती विषालु रक्सी पिएर तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । यिनीहरुले गाउँबाहिर इट्टाभट्टामा भन्ने अवैध रक्सी पिएका थिए । त्यसपछि ७२ घण्टाभित्र रक्सी पिएर बिरामी भएका थप ७ जनाको ज्यान गयो । लगातार भएको मृत्युपछि गाउँमा आक्रोश छ । गाउँलेहरुले पुलिस र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा गाउँमा अवैध रक्सीको कारोबार चलिरहेको आरोप लगाए । यस्तो धन्दामा नेताहरुको समेत संरक्षण रहेको उनीहरुको आरोप थियो ।
दाङमा भेटिए अद्भुत क्षमता भएका युवा बैज्ञानिक | शरिरबाट बत्ती बालेर देखाए | यो भिडियो सक्दो शेयर गरेरसहयोग गरौ
विवाहको ७ फेरा लिनु अगाडि गर्नैपर्ने ८ परीक्षण, नत्र जिन्दगी नै ब र्बा द होला !